Qorshaha Luís Enrique Ee Suuqa Kala Iibsiga Oo Lashaaciyay.
Wargayska Sport ee aadka ugu dhaw kooxda Barcelona ayaa shaaciyay qorshaha suuqa kala iibsiga ee kooxda Barcelona wuxuuna sheegay in Luís Enrique uu doonayo inuu keeno kooxda sedeex ciyaar yahan.
Wargayska ayaa sheegay in Luís Enrique uu u sheegay maamulka kooxda Barcelona in lakeeno kooxda Weerar yahanka kooxda Liverpool Luis Suarez, waxaana muuqanaysa in kooxda Barca ay si dhab ah ugu dhaqaaqday doonista laacib kaan.
Laacib ka labaad waa laacib ka kooxda Fiorentina iyo xulka Colombia Cuadrado, Luís Enrique ayaa u arka laacib kaan mid ku haboon qorshihiisa cusub ee kooxda Barcelona lakiin wuxuu loolan adag kala kulmayaa kooxaha Bayern Munich iyo Arsenal.
Laacib ka seddexaad waa daafaca 20 jir ka ah ee kooxda PSG Marquinhos kaas oo ay Barca ka gudbisay laba dalab ilaa hada waxaana muuqanaysa in kooxda PSG aysan doonayn inay iska fasaxdo laacib kaan lakiin Barca ayaan wali ka quusan saxiixiisa.
Hordhaca Wareega 16ka Koobka Adduunka: France v Nigeria.
Awooda weerar ee Nigeria ayaa tijaabo adag u noqon doonta France, kuwaasoo kaliya labo gool laga dhaliyay tartankaan ilaa iyo haatan.
Weerarka orodka badan ee Nigeria ayaa siin doona daafacyada France tijaabadoodii ugu adkeyd ilaa iyo haatan Koobka Adduunka, iyadoo labada kooxood ay maanta ciyaarayaan kulan ka tirsan wareega 16ka.
“Waa koox aad u fiican, waxa ay dhibaatooyin u abuureen Argentina. Awood ayay leeyihiin, afka horena waa ay ku dhaqso badan yihiin, khadkooda dhexena waa mid shaqo badan” ayuu yiri xiddiga France ee khadka dhexe Yohan Cabaye kaasoo la filayo inuu ciyaaro ka dib ganaax uu ku maqnaa.
“Waxa ay ku ciyaaraan tamar badan.”
France ayaa labo guulo ka gaartay Honduras iyo Ecuador iyagoo aan shabaqa laga soo taaban halka kaliya labo gool laga dhaliyay kulankii ay Switzerland 5-2 kaga badiyeen wareega group-yada.
Dhanka kale Nigeria waxa ay barbaro goolal la’aan ah la soo galeen Iran, waxa ay 1-0 kaga badiyeen Bosnia-Herzegovina, waxaana guuldarro ay si weyn u dagaalameen ay ka soo gaartay Argentina.
Tababarkii khamiistii hore ee Nigeria ayaa la kansalay ka dib markii ay soo baxeen in la isku heysto lacago abaalmarin ah, iyadoo ciyaartoyda ay dalbadeen in la siiyo lacagahooda. Murankaas waa la xaliyay ka dib markii madaxweynaha Nigeria Goodluck Jonathan uu la hadlay tababare Stephen Keshi iyo kabtan Joseph Yobo.
“Niyadeena waa inay xooganaato” ayuu yiri Keshi. “Sida aan ciyaar walba u qaabilno waa isku mid waana inaan badino.”
Kulankaan ayaa noqon doonta kulankii ugu horeysay ee Nigeria ay ciyaarto wareega 16ka Koobka Adduunka tan iyo 1998dii sannadkaasoo Koobka Adduunka ay martigelisay France islamarkaana ay hanatay. Sida ay sheegeen xiriirka kubada cagta Nigeria, xulkooda waxa uu xulka France la ciyaaray kaliya hal jeer waxaana ay 1-0 ku badiyeen Paris 2009kii.
Kulanka: France v Nigeria
Garoonka: Estádio Nacional de Brasilia, Brasilia
Waqtiga: June 30, 7pm Saacada Geeska Afrika
Maxaa Ka Cusub: Xiddiga Chelsea garabka uga ciyaara Victor Moses ayaa ah xiddiga kaliya ee ay Nigeria uga walwalsan tahay dhaawac laakiin waxa uu tababar qaatay sabtidii, waxaana la filayaa inuu ciyaaro. Ciyaaryahanka khadka dhexe Michael Babatunda ayaa si kastaba seegi doona kulankaan ka dib markii curaancurta ay ka jabtay intii uu socday wareega group-yada.
France: Lloris; Debuchy, Varane, Sakho, Evra; Cabaye, Pogba, Matuidi; Valbuena, Benzema, Griezmann.
Nigeria: Enyeama; Ambrose, Yobo, Omeruo, Oshaniwa; Mikel, Onazi; Musa, Moses, Odemwingie; Emenike.
Joel Campbell: “Riyadaydii Waa Ii Rumowday”.
Weerar yahanka kooxda Arsenal iyo qaranka Costa Rica Joel Campbell ayaa soo muujiyay farxadiisa kadib guushii taarikhiga ahayd ee ay xalay ka gaareen xulka qaranka Greece.
Costa Rica oo wacdaro ka dhigaysa sanad kaan koobka adduunka ee Brazil ka socda ayaa xalay gaartay wareega 8da ee koobka adduunka markii ugu horaysay taariikhdeeda kadib markii ay gool kulaad koobka uga saartay xulka qaranka Greece.
Joel Campbell ayaa ku soo qoray Boggiisa Twitter-ka ciyaarta kadib:
“Markii aan yaraa Riyadaydu waxay aheed inaan nqodo geesi wayn, taasna maanta ayeey ii rumowday oo koobka aduunka ayaan ku soo bandhigay”.
“Xulkayga Costa Rica ayaan lawadaagayaa farxadaan, kadib markii aan rigoore ka dhaliyay xulka qaranka Greece iyo guushaa aan ka garanay kulan kaan aadka u adkaa iyo u soo bixitaan keena wareega 8da”.
Neymar Oo Sharaxaad Kabixiyay Ooyintiisii Kadib Markii Ay Brazil U Soo Baxday Wareega 8da.
Laacib ka kooxda Barcelona iyo qaranka Brazil Neyram ayaa ka hadlay sababtii keentay inuu ooyo kadib markii uu laaday rigooradii u danbaysay ee Brazil kulan kii Chile.
Neymar ayaa sheegay in uu rumaysan kari waayay in kubada uu dhex dhigay shabaqa wuxuuna sheegay in miyirkiisu uusan caadi ahayn waqtigaas wuxuuna sii raaciyay inuu ku soo naaxay ciyaartoyda oo qaylinaya iyo tababare Scolari oo dhulka ka kicinaya sida uu sheegay laacib kaan.
Neymar ayaa yiri “Wuxuu ahaa waqti aad u adag, David Luiz wuxuu ahaa mid aad u degan wuxuuna laaday rigooradii u horaysay, kadibna waxaan iska qasaarinay kubado kale oo muhiim inoo ahaa, markii ani la isoo gaaray waxaan dareemay inaan socday dhawr kiilo mitir”.
“Markii aan kubada ku hubsaday goolka, aad ayaan isugu dardarsamay, waxaan ahaa qof aad u daalan, markii aan guulaysanay kaliya waxaan maqlaayay qaylada ciyaartoyda, waxaana arkay tababare Scolari oo dhulka iga qaadaya”.
Marca: Real Madrid Iyo Bayern Munich Oo Ka Heshiiyay Saxiixa Toni Kroos.
Warar ka soo baxaya Spain ayaa sheegaya in Real Madrid ay heshiis ay ku dhameystireyso saxiixa xiddiga khadka dhexe ee Bayern Munich Toni Kroos ay gaartay.
Wargeyska Marca ayaa sheeganaya in Kroos uu u dhaqaaqi doono Santiago Bernabeu isagoo ku soo wareegaya heshiis lacagtiisa ay u dhaxeyso 25 ilaa 30 milyan euro, waxaana uu u saxiixi doonaa heshiis shan sanno ah isagoo xilli ciyaareedkii mushahar ahaan u qaadan doona 5 milyan euro.
Qandaraaska Kroos ee Bayern ayaa waxaa uga haray hal sanno, waxaana jariirada Marca ay sheegeysaa in labada kooxood ay ka heshiiyeen saxiixiisa iyadoo xilli dhow la soo gabagabeyn doono.
24 jirkaan ayaa haatan la maqan xulka Jarmalka ee ka qeybgalaya Koobka Adduunka, kuwaasoo wareega 16ka kula kulmaya xulka Algeria.
Real Madrid Oo Ugu Hanjabtay Benzema Inay Iska Iibin Doonto Haddii…!!
Kooxda Real Madrid ee dalka Spain ayaa si wayn u doonaysa inay cadaadis xoogan saarto laacib kooda ree France ee Karim Benzema si ay uga saxiixdo heshiis cusub.
Karim Benzema ayaa ka baqaya inuu boos ka heli waayo ama uu si joogto ah u ciyaari waayo hadii uu imaado weerar yahan kale wuxuuna dib u dhigay wada hadaladii uu heshiiska ugu kordhin lahaa kooxda haysata koobka horyaalada yurub.
Shabakada El Conomist ayaa sheegaysa in maamulka Real Madrid ay aad uga xumaadeen weerar yahan kooda Benzema waxayna ugu goodiyeen inay iska iibin doonaan hadii uu diido inuu u hogaansamo shuruudaha heshiis kiisa cusub.
Benzema ayaa qaab ciyaareed fiican ku soo bandhigaya koobka adduunka taas ayaana keentay in kooxdiisa ay ku fikirto inay heshiis cusub ka saxiixdo laacib kaan lakiin Benzema ayaa doonaya in loobalan qaado boos joogto ah si uu heshiiska ugu kordhiyo kooxdiisa.
Louis Van Gaal Oo Doonaya Inuu Dirk Kuyt Keeno Man united
Tababaraha cusub ee Man Untied Van Gaal ayaa tixgalinaya inuu si layaableh dib ugu soo celiyo Dirk Kuyt horyaalka Ingriiska isagoo doonaya inuu weerar yahankii hore ee Liverpool ku soo daro safkiisa Man United.
Kuyt oo ay da’diisu tahay 33 jir ayaa hadda ka ciyara kooxda Fernhance isagoo Anfield ka tagay sanadkii 2012. Van Gaal ayaa jecel hab dhaqanka shaqda ee Kuyt. Dirk Kuyt ayaa ka mid ah xulka qaranka Holland ee u soo baxay wareega 16 inkasta oo aanu doorkiisu badnayn.
Netherlands ayaa la kulmidoona xulka qaranka Mexico wuxuuna Kuyt uga digay inuuna weerkoodu nasandoonin kaas oo ilaa hadda dhaliyay 10 gool.
Kuyt ayaa yidhi: “ waxaanu haysanaa Robin Van Persie iyo Wesley Sneijder ku waas oo ka mid ah ciyaartoyda aduunka ugu fiican, waanu naqaanaa halka aanu ku xooganahay, waa in aanu isticmaalnaa halka aanu ku xooganahay”.
Rafa Benitez ayaa liverpool ku soo daray Dirk Kuyt isagoo kula soo wareegay £10million wuxuuna kala soo wareegay kooxda ree Holland ee Feyenoord sanadkii 2006. Kuyt ayaa liverpool u dhaliyay 83 gool isagoo sumcad wayn ku yeeshay Anfield wuxuuna Anfield ku sugnaa 3 sano. Kuyt ayaa ka mid ahaa xulkii qaranka Holland ee guuldarada kala kulmay koobkii aduunka ee 2010. Hadii ay suurto gal noqoto in Van Gaal keeno Kuyt Old Traford wuxuu cadaawad wayn kala kulmi doonaa taageerayaasha Liverpool sidii ay ku dhacday Owen. Liverpool iyo Man United ayayna ka dhaxayn wax xidhiidh ah oo xaga ciyaartoyda lakala iibsado ah.
Kooxaha oo Kuyt u soo ciyaaray iyo waqtiyadii uu la joogay , inta kulan ee uu u ciyaaray iyo waliba inta gool ee uu u dhaliyay:
Muxuu Scolari Ka yidhi Kulankii Adkaa Ee Brasil iyo Chile?
Tababaraha xulka qaranka Brasil Scolari ayaa ka hadlay guushii ay xulkiisu ka gaadheen kulankii adkaa ee dhexmaray xulka Chile. Brasil ayaa guul ay ku dhibtootay ka gaadhay xulka qaraka Chile oo halis galiyay balse ugu danbayn waxay ku kala baxeen Rekooreyaal taas oo Brasil u suurto galisay inay u soo gudbaan quarter finalka koobka aduunka.
Divid Luiz ayaa Selecao hogaanka u dhiibay balse waxaa dhankiisa ka jawaabay Alexis Sanchez oo ciyaarta ka dhigay 1:1, kadibna waxaa ciyaarta lagu daray waqtiga dheeriga ah, labada dhinac ayaan waxba kala dhilin sida sharciga kubbadu dhigaayo waxaa lagu kala baxay rikooreyaal. Julio Cesar ayaa laba rekoore ka badbaadiyay Chile taas oo keenta in Brasil ay u soo gudubto wareega xiga waxayna ugu mahad celinayaan halyaygooda Julio Cesar.
Hadaba markii ay ciyaartu dhamatay ayuu Scolari ka hadlay kulankan wuxuuna yidhi: “Waxaanu dhalinay goola hore laakiin waxaanu la dhibtoonay goolka ay naga dhaliyeen kaas oo aan laga aqbali karin kubbada casriga ah.
“intaa kadib waxaanu helnay 3-4 fursadood oo aanu ku badin karaynay laakiin maanu samayn taa sababtoo ah sax maanu ahayn, waxaananu dareemaynay culays badan. Waxaanu ciyaartoyda ku wada hadalnay qolka labiska kulanka kadib, waa waqtigii aanu sifiican u difaacan lahayn hadii aan dib ugu laabto qaab ciyaareedkaygii kaas oo ahaa mid ku dhisnaa weerar.
“Xaqiiqdii waxaanu dareenay culays, mana fududa inaad koobka aduunka ku ciyaarto wadankaaga, waxaanu qirsanahay in gaadhitaanka finalku aad u adag tahay laakiin ciyaartoyda iyo jamaahiirta ayaa ku lugleh inaanu noqono horyaalka aduunka. Waananu noqondoonaa laakiin kalsoonidu waa waxa dadku naga rajaynayaan taasna waa inaanu ilaalinaa”.
Brasil ayaa wajihidoonta xulka qaranka Colombia ee wareega 8Da kadib markii uu James Rodriguez laba gool ka dhaliyay xulka Uruguay sidaana ay ugu soo baxeen wareega xiga.
Chelsea Oo Diyaarineeso Dalab 60 Milyan Ay Kagudbiso Pogba
Chelsea ay isku diyaarineyso inay khasnadeeda uajabiso sidii ay usoo xirogalin laheyd xiddiga khadka dhexe ee qaranka France iyo kooxda Juventus, Paul Pogba ayaa lagusoo waramayaa inuu noqonaayo xiddigii ugu qaalisanaa abid ay Chelsea lasoo wareegto.
Jariirada Daily Mail ayaa sheegtay in dalabkaan ay diyaarineyso Chelsea uu kudhawaanayo 60 Milyan iyo gorgortan, waxaana laga yaaba in qiimuhu kayaraado intaas, balse kooxda galbeedka London ayaa si walbo isugu dayi doonto inay lasoo wareegto xiddigaan sidii ay ulamataaneen laheyd Cesc Fabregas.
Pogba ayaa waqti fiican iyo qaab ciyaareed heersare ah kuqaadanaayo horyaalka Talyaaniga taniyo markii uu kawareegay kooxda Manchester United, qiimaha sareeyo ee ciyaaryahanka ay kudooneyso Juventus ayaa kajeediyey damaca kooxo badan oo ay kamid yihiin Real Madrid iyo Manchester United oo rajeeneysay inay dib uceshato.
Pogba ayaa xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee Turino dhaliyey shan gool, oo ay kuxigtay xilli ciyaareedkii dhamaaday uu dhaliyey sagaal gool, isagoo labo horyaal laqaaday kooxda Juventus, xiddigaan ayey kaamirooyinka saxaafadu qabteen isagoo Chelsea kuciyaarayo Game ka Football Manager.
Kadib imaanshiyihii Cesc Fabregas Chelsea ayaa suuqa ugu jirtay inay hesho garab bidix difaac, labo weeraryahan iyo ciyaaryahan khadka dhexe ah, waxaa jiro warar sheegayo in Mourinho damacsan yahay inuu kunoqdo shaxdii uu kuciyaari jiray ee 4-3-3, waana sababta uu uraadinaayo ciyaaryahan kale oo khadka dhexe ah.
Tony Kroos ayaa ah magaca kale ee ciyaaryahan khad dhexe oo lala xariiriyey inuu udhaqaaqi doono Stamford Bridge xagaagaan, balse Chelsea ayaa dooqa koowaad kadhigatay laacibka khadka dhexe ee Juventus Paul Pogba.
Hordhac: Costa Rica Oo Wajaheyso Xamaasada Greece
Saacadda: 11:00 Pm Xilliga Soomaaliya.
Costa Rica ayaa saarneed shaashadaha Recife kamid markii ay kasoo baxeen Group ay kuhareen England iyo Italy, wiilashaan bartama America ayaa kujiro qaab ciyaareed wanaagsan oo isla jaanqaad leh.
Waa markii ugu horeesay oo ay is arkaan labadaan xul, Costa Rica ayaa wareega 16 ka soo gaaray halmar oo keliya hadda kahor, waxaana 4-1 ku garaacday Czechoslovakia.
Dhanka kale waa markii ugu horeesay Greece uu soo gaaro wareega nag-baxa, labo kamid ah sagaalka kulan ee koobka adduunka ayey badiyeen, labada marna waxey kabadiyeen xul qaara Afrika kasoo jeedo (v Nigeri 2010, iyo Ivory Cost 2014).
Costa Rica ayaa loobadinayaa inay kusoo gasho isla shaxdii garaacday Italy, mana lafilaayo badalo qasab ku ah inay jiraan.
Kabtanka Greece Kostas Katsouranis ayaa markale diyaa u ah kulankaan.
Tababraha Greece Fernando Santos ayaa sheegay inay tahay inay ilgaar ah uyeeshaan kulankaan “Waa inaan taxaddar gooni ah ulahaano kulankaan, waayo waxey kusoo baxeen kaalinta koowaad ee Groupka geerida.
Greece: Karnezis, Torosidis, Papastathopoulos, Manolas, Holebas, Christodoulopuolos, Maniatis, Karagounis, Kone, Salpingidis, iyo Samaras.
Costa Rica: Navas, Gamboa, Duarte, Gonzalez, Miler, Diaz, Ruiz, Borges, Tejeda, Brenes, iyo Campble.